Entanina ny olona mitazona basy tsy misy taratasy mba hamerina izany mialoha ny 20 jona ho avy izao, araka ny tenin'ny filoham-pirenena.
Fito no tratran’ny andrimasom-pokonolona afak’omaly alina noho ny fampihorohoroana mianjady eny Ampitatafika amin’ny asan-jiolahy. Rehefa nohadihadiana anefa ireo, araka ny loharanom-baovao azo antoka dia olon-tsotra nikarakara ny famonoan’ombin’ny mpirotsaka hofidiana solombavambahoaka iray eny Fenoarivo.
VONO OLONA TOAMASINA
Ireo mpandrafitra efa-dahy hatreto no nanaovan’ny mpitandro filaminana fanadihadiana mikasika ilay raharaha nahafaty olona telo mianaka tao Toamasina izay hita faty ny voalohan’ny herinandro teo. Mbola karohina ilay mpiambina ny faritra nitrangan’ny loza.